Nandritra Ny Roa Herinandro, Nidongy Tsy Namoaka Vaovao Mikasika Ny Filoha Ireo Media Tao Liberia · Global Voices teny Malagasy
Nandritra Ny Roa Herinandro, Nidongy Tsy Namoaka Vaovao Mikasika Ny Filoha Ireo Media Tao Liberia
Voadika ny 28 Mey 2013 4:04 GMT
Efa ho roa herinandro be izao no tapitr'ireo media Liberiana tsy miankina tsy nitaterany vaovao mikasika ny filoham-pireneny Ellen Johnson Sirleaf, fampanginana napetrak'izy ireo ho an'ilay mpitarika noho ny tsy nahavitàny nanameloka ny fanehoan-kevitry ny talen'ny fiarovana azy nanondro ny mpanao gazety ho “mpampihorohoro”.
Ny fifanandrinana miantana teo amin'ny media sy Sirleaf dia nanomboka tamin'ny fotoana nirotsahan'ireo Liberiana mpanao gazety hanatevina laharana ireo mpanao gazety manerantany mba hankalaza ny Andro Erantany Ho an'ny Asa Fanaovana Gazety tao amin'ny tanàna an-tseranana Liberiana ao Buchanan ny 3 May 2013. Kanefa, tohina ireo mpandray anjara dia rehefa injay i Othello Warric, talen'ny andian-tafika mpiaro ny filoham-pirenena [Executive Protective Service (EPS)], nilaza fa ny biraony dia tsy hisalasala mihitsy hanenjika ireo mpanao gazety izay “mitsabatsabaka amin'ny raharahan'ny fiadidiana ny prezidansa”.
“Mitandrema fatratra rehefa mametraka fanontaniana mikasika ny fahamendrehan'ny Liberiana ianareo. Mitandrema fatratra, satria penina no anànanareo fa ny anay kosa basy. Ary raha manohintohina ny toetra ahalalàna na ny fahamendrehan'ny Liberiana ianareo, tahaka ahy, dia ho avy any aminareo izahay,” Warrick no voatatitra ho nilaza izany nandritra ilay hetsika.
Ny Filoha Ellen Johnson Sirleaf niteny tao Margibi,Liberia. Sary natolotry ny Cyrus Wleh Badio Sekretera miandraikitra ny seraseran'ny Filoha Sirleaf.
Taorian'io Zoma mainty io, ireo tranonà media Liberiana tsy miankina dia nametraka fampanginana ny resaka media raha resaka momba ny prezidansa izay nesorina taorian'ny fidirana an-tsehatra nataon'ny antenimiera.
Ny fandrahonana nataon'ny filohan'ny fiarovana ny lapam-panjakana sy ilay fampanginana ny media dia niteraka adihevitra tety anaty aterineto, indrindra fa tao amin'ny pejy Facebook an'ny Discussing Liberia [Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Discussing Liberia dia vondrona mihidy. Fampiasàna votoaty nahazoana alàlana]. Ankoatry ny zavatra hafa, ny adihevitra dia nihodinkodina tamin'ireo olan'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny fifandraisana eo amin'ny mediam-panjakana sy ny tsy miankina ao Liberia.
Peter Bemah, Liberiana iray mpandalina sy mpikaroka ao amin'ny Antenimieran-doholona Liberiana, dia naneho ny ahiahiny momba ny fahanginan'ny filoha mikasika ilay olana:
Mampiasa saina ny fahanginan'ny ao amin'ny fitondràna momba ity olana ity no sady mampiahiahy. Antenaiko ny mba handraisan'ity filoha ity ny fepetra famaizana sahaza mifanandrify amin'ity olana ity.
Nanazava ny toerana noraisin'ny Filoha manoloana ity olana ity i Tom Winston Monboe :
Manana ny fijeriny an'io olana io tokoa ny fitondràm-panjakana ry ralahy. Notanisaina fa hoe nilaza ny filoha fa afaka tazonina ela araka izay tian'ny media ilay fikombonam-bava. Na manafintohina toy inona aza izany fanambaràna izany, io aloha hatreto no toerana noraisin'ny Filoha mikasika ilay olana.
Niaro an'i Warrick talen'ny fiarovana i Tamba Siaffa:
Raha toa ny mpanao gazety any Liberia ka manana zo sy fahafahana hitatitra tsy misy arakaraka na fanalam-baraka an'ireo karazana tantara rehetra izay ny 50%n'izy ireny dia lainga avokoa, nahoana ny olom-pirenena no tsy mba hanana zo sy fahafahana mitovy aminy mba haneho ny hetahetany mikasika ny fomba fahatsapan-dry zareo ny asa fanaovan-gazety? Manosika ny raharaha handeha lavitra ny sendikàn'ny mpanao gazety. Ny filoha dia filoha foana ary tsy maintsy omena haja amin'ny maha-filohan'ny repoblika. Manana mpiara-miasa aminy izy izay miteny amin'ny anarany amin'ny fotoana maro. Miteny amin'ny anarany ny Minisitry ny Serasera sy Sekretera miandraikitra ny seraseran'ny Filoha. Efa niresaka ry zareo saingy ny tian'ny mpilaza vaovao ny filoha mba hiteny voalohany amin'ny anarany samy irery. Tsy mangarahara izany [sento].
Ho firaisankina amin'ireo mpiara-miasa aminy sy ny foto-kevitry ny fahalalahana miteny, ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety any Afrika Andrefana dia taratasy ofisialy ho an'ny filoha Liberiana ary namintina ireo fitoriany mikasika ny fandrahonan'i Warrick:
Ireo fanambaràna fanampiny ireo dia mariky ny fitsabatsabahana mampiahiahy ataon'ny fanjakàna amin'ny fivezivezena malalaky ny vaovao, fikatsahana hitsabaka amin'ny fomba tsy ara-dalàna, tsy misy azo itarainana, amin'ny fikirakiràna ny vaovao sy ny hevitra, na fanajàna izay rehetra mety ho endrika dingàna apetraky ny lalàna.
Izany dia mety midika ho azy fa ny governemantanareo dia tsy maniry ny hampiroborobo ny fivezivezena malalaky ny hevitra sy ny fijery tsy mitovy. Amin'ny maha-olo-malaza sy amin'ny maha-filoham-panjakana sy ny governemanta, fehezin'ny lalàna iraisam-pirenena, ianao no andrasana ho lasibatry ny fanaraha-maso henjana sy tsikera mivaivay avy amin'ny mpilaza vaovao miohatra amin'ny olon-tsotra ary andrandraina koa ianao raha ny marina handefitra amin'ireo fanaraha-maso sy tsikera tahaka izany.
Maniry koa izahay ny hitondra ny fahalinanao amin'ny fanohananay tsy azo hozongozonina ny Sendikàn'ny Gazety ao Liberia, ireo mpanao gazety tsy miankina ary ny rehetra mpiray dia amin'ny media eto Liberia. Mijoro eo anilan'ny tsirairay ny WAJA ary amin'izay toerana rehetra noraisin'ny PUL hatreto tamin'ny fanoherana sady mizotra mankany amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ity krizy ity.
Phillip Blamo, Pretra Liberiana, nandefa ny filazany mikasika ny tenin'ny filoha rehefa nanontaniana mikasika ilay fikombonam-bavan'ny media:
TIAKO io tsy firaharahàna mahafinaritra io, Antenaiko ny hanohizan-dry zareo an'io mandritra ny fotoana maharitra.
Tsy noeritreretin'i James Blackie ho vahaolana ny fandavan'ny media tsy hitatitra ny resaky ny filoha:
Mamaha [ireo] olana ve ny fibodoana atao amin'ny filohantsika? Andao isika hikaroka lalan-kafa satria ilaintsika amin'ny maha-olom-pirenena antsika ny hahafantatra [izay] ataon'ny filoha isan'andro mba hahafahana mitsikera azy na midera azy. Miangavy, andao hitady karazana sazy hafa ho azy ireo.
Tanaty ezaka iray hamaliana ny tohan-kevitr'i Blackie sy manipika ny ilàna ny asa fanaovana gazety tsy miankina, nanao fanamarihana i Siezie Siefa:
HENOY NY LBS [fampielezam-peom-panjakana “Liberian Broadcasting Service”] RAHA TOA IANAREO KA NOANA VAOVAO AVY AMIN'ILAY MPANAO HATSIKANA.
SAINGY TSY AZONAO ATAO NY MODY LIANA AMIN'NY FAHALALAHAN NY ASA FANAOVANA GAZETY NO SADY MANEHO FITONDRANTENA MIDEHADEHAKA IHANY.
TSY KILALAONAREO AKORY NY MPANAO GAZETY KA HITENENAN-DRATSY. Toy izany koa TSY MAINTSY SAZIANA NY RAFI-PITONDRANA TSY MANOME HAJANY AZY. HILAZA AMINAO ireo psikôlôgy FA IO NO VALINY HO AN'NY RAFITRA TSY MANANA FANKATOAVANA AVY AO AN-TOERANA / ANATINY.